एजेन्टले ठगेको रकम उठाउन बालिका अपहरण! पति पत्नी नै प्रहरी खोरमा :: PahiloPost
एजेन्टले ठगेको रकम उठाउन बालिका अपहरण! पति पत्नी नै प्रहरी खोरमा
5th February 2019, 06:14 pm | २२ माघ २०७५
काठमाडौँ : माघ १० गते साँझ। मनिष गुप्ता रात्रि बस चढेर जनकपुरदेखि काठमाडौं आइपुगे।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ बस्ने गुप्ता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलाका क्रममा विगत दुई वर्षदेखि काठमाडौं धाइरहेका थिए। तर, यसपटक गुप्ताको काठमाडौँ यात्रा अलिक फरक थियो।
काठमाडौँमा ‌ओर्लिएपछि गुप्ता काठमाडौँ महानगरपालिका ३२ कोटेश्वर खरिबोट स्थित बबिता साहको घरतिर लागे। साह र गुप्ता धनुषामा छिमेकी समेत हुन्। उनी काठमाडौँ आउँदा साहको घरमा पुग्ने गरेका थिए।
बिहानको करिब साढे ८ भइसकेको थियो। डाक्टर साह थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा काम गर्न निस्की सकेकी थिइन्। उनका श्रीमान् समेत घरमा थिएनन्। घरमा थिइन्, साहकी दुई वर्षीया बालिका। गुप्ता घरमा खेलिरहेकी तिनै बालिकालाई लिएर लुसुक्क निस्किए।
‘तपाईँकी छोरी मसँग छ। २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नदिए मार्दिन्छु।'
फोन गर्ने अरू कोही थिएनन्। चिनजानकै मनिष गुप्ता थिए। घरमा बालिका समेत नभएकाले साह परिवारमा आतङ्क छायो। साह परिवारले तत्कालै प्रहरीमा खबर गर्‍यो।
साहको परिवारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ गुप्ताकी श्रीमती अर्चना गुप्ताको नाममा जनकपुरमा आइएमी गर्दिए। गुप्ता सामान्य परिवारका व्यक्ति हुन्।
गुप्ता बालिका लिएर गौशालाबाट जनकपुर जाने सुरमा थिए। तर, प्रहरीले पहिले नै गौशालाबाट जनकपुर जान लागेको सुइको पाएको थियो। बालिका लिएर गौशाला जाँदै गर्दा प्रहरी भएको थाहा पाएपछि गुप्ता बालिका छोडेर भाग्न सफल भए।
बालिका अपहरणमा परेको करिब ७ घण्टापछि प्रहरीले काठमाडौँको गौशालाबाट बालिकाको उद्धार गरेको हो। प्रहरीले सोही दिन गुप्ताकी श्रीमतीलाई समात्यो। तर, गुप्ता फरार रहे।
अन्तत: १२ दिनपछि गुप्ता पनि पक्राउ परे।
‘हामीले धेरै अनुसन्धान र सुराकी खटाएपछि समात्न सफल भएका हौँ। गाउँतिर लुकेर बसेको सूचना आएको थियो,' महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी वसन्त लामाले भने।
गुप्ताको पृष्ठभूमि आपराधिक छैन।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका गुप्ताले आफ्नो डुबेको रकम उठाउन अपहरण गरेको खुलाएका छन्। करिब दुई वर्ष अघि गुप्ताले माल्द्वीप्स जान भन्दै २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। गुप्ताले पैसा बुझाउँदा साक्षी बसेका थिए अपहरित बालिकाका बुबा।
तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गुप्ता माल्दिप्स उडेनन्। दिएको पैसासमेत फिर्ता आएन। ऋण गरेर लिएको पैसा डुबेपछि गुप्ता साहसँग हारगुहार गर्न पुगे। साक्षी बसेका बालिका बुबाले केही गर्न सकेनन्। त्यही पैसा उठाउन गुप्ताले गलत बाटो रोजेको देखिएको छ।
‘गुप्ता पीडित भएको त देखिन्छ तर उनले बालिका अपहरण गरेर फिरौती र बार्गेनिङ गर्नु अपराध हो,' एसएसपी लामाले भने।
गुप्ताले कसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान पैसा बुझाएका थिए? बालिका बुवा वैदेशिक रोजगारीका एजेन्ट थिए थिएनन् भन्ने स्पष्ट खुल्न सकेको छैन।
एजेन्टले ठगेको रकम उठाउन बालिका अपहरण! पति पत्नी नै प्रहरी खोरमा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।